တွင်းနက်တစ်ခု ဘယ်လိုအသံထွက်သလဲ- NASA ၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ် | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 16/05/2022 08:42 | နက္ခတ္တဗေဒ
Perseus galaxy အစုအဝေး၏ဗဟိုရှိတွင်းနက်သည် 2003 ခုနှစ်ကတည်းက အသံနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်။ အကြောင်းမှာ NASA နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များသည် တွင်းနက်များမှဖိအားလှိုင်းများသည် ဤ galaxy အစုအဝေးရှိ hot gas များကို လှိုင်းဂယက်ဖြစ်စေကြောင်း NASA မှရှာဖွေတွေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသော အသံသည် အလယ်ဗဟို C အောက် 57 octave ဖြစ်သောကြောင့် လူသားမျိုးစိတ်ကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ မကြားနိုင်သော မှတ်စုတစ်ခုအဖြစ် ဘာသာပြန်နိုင်သည်။ ယခုအခါ အမျိုးအမည်အသစ်သည် မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် နောက်ထပ်မှတ်စုများ ယူဆောင်လာပါသည်။ တွင်းနက်က ဘယ်လိုအသံလဲ။ ဒါဟာ သိပ္ပံပညာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် စိုးရိမ်စရာတစ်ခုပါပဲ။
ထို့ကြောင့် တွင်းနက်သည် မည်သို့သော အသံနှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ကို နက်နက်နဲနဲ ပြောပြပါမည်။
1 တွင်းနက်က ဘယ်လိုအသံလဲ။
2 နောက်ထပ် black hole ထဲက အသံတွေ
3 အသံကို ဘယ်လိုဖမ်းကြတာလဲ။
4 ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပေါ် လူထုတုံ့ပြန်မှု
အချို့သောနည်းလမ်းများတွင် ဤ sonication သည် ယခင်က ဖမ်းယူထားသော အသံများနှင့် ကွဲပြားသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် တွေ့ရှိရသည့် တကယ့်အသံလှိုင်းများကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်း ဖြစ်သည်။ NASA ၏ Chandra X-ray Observatory မှအချက်အလက်များ. ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့သည် အာကာသထဲတွင် အသံမရှိဟု အမြဲတမ်း သင်ကြားခဲ့သည်။ အာကာသအများစုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လေဟာနယ်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်အပေါ် အခြေခံသည်။ ထို့ကြောင့် အသံလှိုင်းများ ပြန့်ပွားရေးအတွက် မည်သည့်နည်းလမ်းမှ မပေးနိုင်ပါ။
သို့ရာတွင်၊ ဂလက်ဆီအစုအဝေးတစ်ခုတွင် ဂလက်ဆီ ရာနှင့်ချီ သို့မဟုတ် ထောင်ပေါင်းများစွာကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် ဓာတ်ငွေ့ပမာဏ အများအပြားရှိသည်။ ဤနည်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် အသံလှိုင်းများသွားလာရန် ကြားခံတစ်ခု ဖန်တီးပေးသည်။ Perseus ၏ ဤသားစပ်မှုအသစ်တွင်၊ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များက ယခင်ကသတ်မှတ်ထားသော အသံလှိုင်းများကို ထုတ်ယူပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်ကြားရသည်။ အသံလှိုင်းများကို အလယ်ဗဟိုမှ အကွာအဝေးတွင် အချင်းများသော ဦးတည်ချက်ဖြင့် ဆွဲပါသည်။ နောက်တော့၊ အချက်ပြမှုများကို လူ့အကြားအာရုံအကွာအဝေးတွင် ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ပြီး ၎င်းတို့၏ အမှန်တကယ် အသံထွက်အား 57 နှင့် 58 octave ဖြင့် မြှင့်တင်ထားသည်။
အသံသည် အကြိမ် ၁၄၄ ဘီလီယံကြားရပြီး ၎င်း၏ မူလကြိမ်နှုန်းထက် အဆ ၂၈၈ ဘီလီယံ ပိုများသည်။ စကင်န်ဖတ်ခြင်းသည် ပုံတစ်ဝိုက်ရှိ ရေဒါနှင့် ဆင်တူပြီး လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးမှ ထွက်လာသော လှိုင်းများကို ကြားနိုင်စေပါသည်။
နောက်ထပ် black hole ထဲက အသံတွေ
Perseus ဂလက်ဆီအစုအဝေးများအပြင်၊ နောက်ထပ်နာမည်ကြီးတွင်းနက်တစ်ခု၏ အသံထွက်အသစ်တစ်ခု စတင်နေပြီဖြစ်သည်။. သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ ဆယ်စုနှစ်များစွာ သုတေသနပြုပြီးနောက်၊ Messier 87 black hole သည် Event Horizon Telescope ပရောဂျက်ကို 2019 ခုနှစ်တွင် စတင်လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် သိပ္ပံပညာအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ကျော်ကြားသူများအဆင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။
ပုံ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ အတောက်ပဆုံးဧရိယာသည် တွင်းနက်ဖြစ်သည်။ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ တည်ဆောက်ပုံမှာ တွင်းနက်မှ ထုတ်ပေးသော ဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်သည်။ ဂျက်လေယာဉ်သည် black hole ပေါ်သို့ ဒြပ်စင်များ ပြုတ်ကျခြင်းကြောင့် ဂျက်လေယာဉ်ကို ထုတ်လုပ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထိုက်ပါသည်။
Sonification သည် ပုံကို ဘယ်မှညာသို့ အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် စကင်န်ဖတ်သည်။ ဒါဆို ဒီ "အာကာသအဖွဲ့" က ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ။ ရေဒီယိုလှိုင်းများကို အနိမ့်ဆုံးအသံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး၊ midtones နှင့် X-rays တွင် optical data ( Chandra မှတွေ့ရှိသည် )
ရုပ်ပုံ၏ အတောက်ပဆုံးသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ဆူညံသော အသံထွက်ဧရိယာများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ အဲဒီ့မှာ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေက Event Horizon Telescope က ဖမ်းယူထားတဲ့ နေရောင်ခြည် အစုအဝေး 6.500 ဘီလီယံရှိတဲ့ တွင်းနက်ကြီးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
လူသားများသည် အထူးတီထွင်ထားသော အကြားအာရုံမရှိသော်လည်း သိပ္ပံပညာရှင်များက ရရှိသော အသားဓာတ်သည် ဤဖမ်းယူထားသော လှိုင်းများကို လူ့နား၏အကွာအဝေးအတွင်း ပြန်လည်ပေါင်းစပ်နိုင်စေကာ၊ အမှန်တကယ် အသံထွက်ထက် 57 နှင့် 58 octave ရှိသော စကေးထက် 144 နှင့် 288 ကြားကြားရသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ မူလကြိမ်နှုန်းထက် အဆ ၂၈၈ ဘီလီယံ ပိုများသည်။quadrillion ဖြစ်သည့်
ဒီ sonification ကိုဆောင်ရွက်တာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပေမယ့် CXC က မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ တကယ့်အသံလှိုင်းတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးကတည်းကပါ။ လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ခန့်ကပင် တွင်းနက်ရုပ်တုသည် နေအဖွဲ့အစည်း၏ အရွယ်အစားထက် ရှစ်ဆခန့် လွှင့်တင်ခဲ့ပြီးကတည်းက နက္ခတ္တဗေဒပညာသည် ခုန်ပျံကျော်လွှားကာ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လာသည်ကို အလေးပေးဖော်ပြရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဒါဆို ဂြိုဟ်တွေ နဲ့ နဂါးငွေ့တန်း တစ်ခုလုံး အသံတူတဲ့ ဘီလူးတွေနဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အရာတွေကို အခု သင် သိပြီ ။
လူကြိုက်များသော အထင်အမြင်လွဲမှားမှု အာကာသ အများစုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လေဟာနယ်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့် အာကာသထဲတွင် အသံမရှိ၊ အသံလှိုင်းများ ပြန့်ပွားစေရန် ကြားခံကိရိယာကို မပေးဆောင်ပါ။ သို့သော် ဂလက်ဆီအစုအဝေးတစ်ခုတွင် ရာနှင့်ချီသော သို့မဟုတ် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဂလက်ဆီများကို မျိုချနိုင်သည့် ဓာတ်ငွေ့ပမာဏများစွာရှိပြီး အသံလှိုင်းများသွားလာရန် ကြားခံအဖြစ် ထောက်ပံ့ပေးသည်။
နာဆာသည် လူ့နားမှမှတ်မိနိုင်သော နက္ခတ်ဗေဒဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အခြေခံအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် အသံချဲ့စက်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ဤအသံများကို ကျွန်ုပ်တို့ကြားနိုင်သည်။
တွင်းနက်များသည် အလင်းကိုပင် မမြင်နိုင်လောက်အောင် ပြင်းထန်သော ဆွဲငင်အားရှိသည်။ NASA က တွင်းနက်မှာ တွေ့ရှိရတဲ့ အချက်အလက်တွေကို များများစားစား မဖော်ပြထားပေမယ့် အသံတွေထွက်ပေါ်ချိန်မှာတော့ ဒါဟာ "တစ္ဆေဆူညံသံ" ဒါမှမဟုတ် "သန်းပေါင်းများစွာသော သက်ရှိပုံစံမျိုးစုံ" လို့ ပြောဆိုတဲ့ မှတ်ချက်တွေနဲ့ အင်တာနက်မှာ ပြည့်လျှံသွားခဲ့ပါတယ်။ .
NASA ၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် တင်ထားသော မှတ်ချက်ပေါင်း 10.000 ကျော်ထဲမှ အချို့မှာ ""ကမ္ဘာနဲ့ဝေးဝေးနေပါ" ဒါမှမဟုတ် "ဒါတွေဟာ စကြာဝဠာရဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်အသံတွေပဲ" လို့ပြောကြတဲ့ တခြားသူတွေကို သင်ကြားဖူးဖူးသမျှထဲမှာ အလှပဆုံးအရာပဲ"။
ဤနေရာတွင် တွင်းနက်သံဖြင့် သင့်အား ထားခဲ့ပါ။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် တွင်းနက်သည် မည်သို့သော အသံနှင့် နက္ခတ္တဗေဒတွင် အရေးအကြီးဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » နက္ခတ္တဗေဒ » တွင်းနက်က ဘယ်လိုအသံလဲ။